China FOTON C8L EV ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Foton
Ezubere ya maka obodo ndị pere mpe na nke ọkara, ọ na-egbo mkpa njem dị iche iche dịka ngalaba alaka obodo na njem ụgbọ ala. Europeandị European na-agbanwe agbanwe na nke naanị, mara mma ma dị ọhụrụ, ọ na-eduga usoro ejiji ọha na eze.
N'ozuzu Dimension 8540 * 2450 * 3000/3100
Oche ụkwụ 4450
Curb arọ 9.15T
Njem / Njikwa ikike 56-67 / 12-31
Nhazi ahụ Monocoque, ntinye di ala / uzo abuo
Nchikota nke mgbanwe, ịdị mfe nke nnweta na nzukọ gbasara ime ime, na ikuku efu, kọwaa DNA nke ụgbọ ala ọhụrụ a. Foton C8L EV ụgbọ ala na-ezute ụdị njem dị iche iche maka mkpa alaka alaka obodo na njem ụgbọ ala.
Nchaji letslọ ahịa
Nchikota nke mgbanwe, ịdị mfe nke nnweta na nzukọ gbasara ime ime, na ikuku efu, kọwaa DNA nke ụgbọ ala ọhụrụ a. Foton C8L EV ụgbọ ala na-ezute ụdị njem dị iche iche maka mkpa alaka alaka obodo na njem ụgbọ ala. N'igosipụta ụdị ọmarịcha nwanyị mara mma na-enweghị ọtụtụ ihe ịchọ mma, ọ na -emepụta njirimara na onyonyo nke ndị ọrụ na-achọpụta nke ọma.
na-adịgide adịgide magnet synchronous moto
Ejiri usoro ihe eji arụ ọrụ ụgbọ ala dị elu, yana ọtụtụ afọ nke azụmahịa, ọnụ ọgụgụ ndị bịaranụ dị elu.
Kọmpat ike Ọdịdị layout
na-arụ ọrụ ihe agbara nke 80-120 kilomita na ibu zuru oke, na naanị 2-3 ugboro nke na-akwụ ụgwọ kwa ụbọchị yana 8-10 afọ ndụ batrị.
izute ụdị njem dị iche iche maka mkpa alaka ụlọ ọrụ na njem ụgbọ njem.
Okpomọkụ-control jụrụ usoro
Ghọta ọgụgụ isi ọsọ iwu dabeere radieshon ina iji nweta elu-arụmọrụ na ume ịzọpụta.
GPS jikọtara ọnụ na nlekota nlele vidiyo na-eme ka ndị ọrụ nchịkwa nwee ike nyochaa ọnọdụ ụgbọ ala na ọnọdụ ụgbọ ala na-anagide nsogbu ozugbo, dịka ụgbọ ala karịrị ma ọ bụ esemokwu ọkwọ ụgbọala site na mkparịta ụka olu
Usoro a na-egosipụta usoro nhazi nke usoro kesara na njikwa etiti, na-achọpụta nkekọrịta ozi n'etiti ọdụ na ụgbọ ala, na ime ka nnweta nke ihe onwunwe dị
On-osisi management usoro-iTink, na ọgụgụ isi gburugburu ebe obibi ngwaahịa, ọgụgụ isi ime ihe nkwado na humanized ọrụ, na-eke ihe management n'elu ikpo okwu maka ndị mmadụ, ụgbọala na okporo ụzọ